Isiko Ngathi Inkonzo kunye noMvelisi | Ukwenziwa kwentsimbi yeHengli
Cnc inkonzo machining
Laser ukusika inkonzo
Inkonzo yokubumba yentsimbi
Inkonzo yokusika ilangatye / iplasma
Iinkonzo zokusika ilangatye / iplasma
Iinkonzo laser ukusika
Iinkonzo machining Cnc
Iinkonzo zokubumba zentsimbi
Hangzhou Hengli Metal Ukwenziwa Co., Ltd.
U-Hengli ngumboneleli ohlanganisiweyo opheleleyo weenkonzo zokuvelisa kunye nezobunjineli ezibonelela nge-CNC ukusika iplasma, i-CNC ukusika ilangatye, ukusika i-laser, ukugoba, ukutyabeka kunye nokuwelda (i-EN1090, i-ISO 3834-2 eqinisekisiweyo, ngaphezulu kwe-160 yabasebenzi kubandakanya i-Europe / i-US iziqinisekiso ezifanelekileyo zeewelders, urhulumente -obugcisa be-8 iwelding yeerobhothi), ukupeyinta izinto zentsimbi kunye neendibano ezintsonkothileyo, ezongezwe ngexabiso eliphezulu kumacandelo ezolimo, ulwakhiwo, ezemigodi, amandla, iilori ezinzima kunye namacandelo ezorhwebo.
Ukusukela ngo-2002, iqela lethu le-660 leqela leenjineli, i-welders, indawo yokugcina izinto, abaqhubi bezixhobo, iingcali zenkonzo yabathengi, kunye nabameli bezentengiso, bonke bakhona kwaye bakulungele ukumamela iimfuno zakho kwaye banikezele kwisithembiso sethu seyona nkonzo ibalaseleyo yentsimbi.
Abasebenzi bethu baya kuyilawula iprojekthi yakho kunxibelelwano lwakho lokuqala ngokuhambisa imveliso egqityiweyo.
I-Hengli ixhotyiswe ngokupheleleyo, i-55,000 sq m2. iziko lisibonelela ngemveliso epheleleyo kunye nokwenza izinto ngokwesiko eziyimfuneko zokuzenzela iimveliso zesiko kwisicelo sakho.
I-Hengli ibonelela ngovavanyo olwenziweyo lwe-100% kwaye inokubonelela ngovavanyo olongezelelweyo lokuqinisekisa ukuba kufuneka njalo.
Gqibezela ukuBumba kunye neeNkonzo zeNdibano-Iinkonzo zethu zibandakanya ukusika i-CNC yeplasma, ukusika ilangatye, ukusika i-laser, ukujika, ukugoba, ukucheba, ukuqengqa izixhobo kunye nokudibanisa iintsimbi. Sivelisa olona luqinileyo lonyamezelo lwenziwe ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukuthembeka kweqonga. I-welders zethu ziqinisekisiwe yi-AWS / TUV, kwaye ii-welders zethu kunye neenkqubo zokuwelda zihlangabezana ne-EN1090 kunye ne-ISO 3834 imigangatho. Sinokubanakho ngokwamanani ukusuka kumzekelo wokuqala wokubaleka kwemveliso enkulu.
Iinkonzo zokugqiba -Sibonelela ngeenkonzo zokugqiba ukuba ziyafuneka, nangamaqabane athembekileyo. Ezi ziquka machining, ukupeyinta, ukutyabeka, besila kunye ipolishi. Iinkonzo ezongezelelweyo ziyafumaneka.
Sinikezela ngeenkonzo zokuvavanywa kwe-NDE Amava ethu ekuyileni iimveliso zesiko kwizicelo ezikhethekileyo ziqinisekisa ukuba iprojekthi yakho iya kugqitywa kwiinkcukacha zakho.
Sitsalele umnxeba namhlanje okanye ucofe apha ukucela ikowuti yesicelo sakho.
Inombolo ye-20 yeFengdu Road, iPingyao Idolophu, kwiSithili seYuhang 311115 Hangzhou, PR China